Ngabe uZungu ujabulela ikhaya elisha?
UBONGANI Zungu weBafana Bafana angase azitholele iqembu elisha azodlala kulo ngesizini ezayo Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | June 30, 2020
KUDLULE amahora ambalwa kuvele ukuthi isilomo seBafana Bafana, uBongani “Ben 10” Zungu, esidliwe yizembe saphinde sabuyiswa yinkantolo neqembu laso laseFrance i-Amiens SC, sifunwa nguSteven Gerrard opheka iGlasgow Rangers yaseScotland, sabhala ku-twitter ukuthi: “uNkulunkulu emuhle njalo.”
UNkulunkulu emuhle enjalo yingoma yomunye wabaculi abangaconsi phansi eNingizimu Afrika, uSjava, kodwa abalandeli bakaZungu ku-twitter lokhu bakuthathe ngokuthi ujabulela ukuthi usezoba nekhaya elisha.
IFrance Football, iphephandaba elifaniswa neBhayibheli likanobhutshuzwayo eFrance, ibike ukuthi uGerrard, owayengumdlali ongaconsi phansi kwiLiverpool ne-England kodwa osepheka elinye lamaqembu amakhulu aseScotland, ubebuza sakuphenya eqenjini likaZungu lakudala ukuthi ungumuntu onjani.
Ngaphandle kokuvela kukaGerrard iphephandanda lingakuveza nokuthi njengoba i-Amiens idliwe yizembe ngendlela engajwayelekile, kwazise isizini kaLigue 1 waseFrance inqanyulwe ingakapheli, uZungu uyadingeka kwiStrasborg edlalelwa womunye wabagadli beBafana uLebo Mothiba khona eFrance.
Nangasekuqaleni kwesizini, uZungu uke wakhonjwa kwiMallorca yaseSpain. Ngokwemibiko yaseFrance ngaleso sikhathi, kuphele isikhathi sokuvuleka kwewindi lokushintshana ngabadlali engakaqedwa wonke amaphepha okuwubufakazi futhi bokuthi yize efunwa yiRangers neStrasborg, nakwiSpanish La Liga angaqhamuka khona ngesizini ezayo.
Unenkontileka ephela ngoJuni 2021 kwi-Amiens kodwa ngokwesimo ekusona nakanjani izomdedela ngokusho kweFrance Football.
“Sithole ngesikhulu seVitoria Gurimaraes SC ayeyidlalela ePortugla ukuthi uGerrard ubebuza sakubaphenya ngoZungu okubenze bacacelwa wukuthi uyamfuna. Osekungenzeka manje wukuthi ikhule imali ebiyifuna ngaye i-Amiens kwazise ayanda amaqembu akhombisa intshisekelo kuye,” kubhala leli phephandaba.
IRangers ilale isibili kwiGlasgow Celtic kwenye isizini eqedwe isigubhukane ngenxa yeCoronavirus. IStrasborg iqede ilele endaweni ka-10 kwiligi enkulu yaseFrance.
Konke kulele kuyena uZungu obone kungcono ukuthi amandla avele awacele kuMdali kwi-twitter. Cishe bonke abamlandela kule nkundla yokuxhumana bebekuhlanganisa neRangers lokhu. Kube khona nalabo abebeqhamuka ngisho nanokweKaizer Chiefs.